चुनाव सार्ने बहसको अन्तरकथा: स्थानीय तहको निर्वाचनसँग किन डराइरहेछ गठबन्धन ? - Nepal Face
स्थायी समिति सदस्यहरूलाई माधव नेपालको सल्लाह, ओलीमाथि विश्वास छ भने गए हुन्छ
काठमाडौं। स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ। प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन्। उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ। तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर किन निर्वाचन धकेल्न लागिपरेका छन् गठबन्धनका नेता ?
संघीयताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएको छ स्थानीय तह। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पनि स्थानीय तह नै भए। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताले घरदैलोमा पाएको महसुस गरेकै छन्। एमालेबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नै भए। विकासमा अपवादबाहेक उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्य विभिन्न आँकडाले देखाउँछन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ।
# पाँच दलीय गठबन्धन # स्थानीय तह निर्वाचन